अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
Tag: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको लेखाको ठहर, छानबिनको जिम्मा अख्तियारलाई
काठमाडौं, पुष ३ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता देखिएको भन्दै थप छानबिन गरी कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समितिको
घुस लिएको अभियोगमा मालपोत कार्यालय भरतपुरका कर्मचारी विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं, मंसिर २९ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय भरतपुर, चितवनका लेखा अधिकृत, नायब सुब्बा र लेखापालविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगका अनुसार विभिन्न फाँटबाट
‘तीनै तहको सरकार र नागरिक मिलेर भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्छ’
पोखरा, मंसिर २८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले तीनै तहका सरकार र नागरिक समाज मिलेर भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ । आयोगको
अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा विपी प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति दासविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं, भदौ ३० । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पदीय दुरुपयोग गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको अभियोगमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकूलपति डा. बलभद्रप्रसाद दासविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको
अख्तियारको पुरानै रोगबाट घिमिरे पनि ग्रसित
मीरा बस्नेत र दिलिप पोखरेल (इेमेज) काठमाडौं, भदौ २८ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नविन घिमिरेको कार्यकाल आइतबारबाट सकिएको छ । तुलनात्मक रुपमा स्वच्छ छबी बनाएपनि साना ठूलो
विचौलियाको दबावमा परेर जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धि निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न मन्त्री अर्यालको चुनौती
काठमाडौं । भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धि मन्त्रिस्तरिय निर्णयको बचाउ गर्दै विचौलियाको दबावमा परेर निर्णय गरेको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभएको छ ।
वाणिज्य विभागका नासु महतो पक्राउ
काठमाडौं, भदौ १ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवाग्राहीसँग दश हजार घुस लिएको अभियोगमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका नायब सुब्बा शिवशङ्कर महतोलाई सोमबार पक्राउ गरेको छ । फर्मको
अख्तियारमा कार्यरत १५ जना सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं, साउन २० । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ । केन्द्रीय कार्यालय टंगालमा कार्यरत १५ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो
बुटवल, साउन १९ । रूपन्देहीको सैनामैनाबाट करिब ९ लाख घुससहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत प्रमोद भट्टराई र सहायक संरक्षण अधिकृत बिष्णु रोकायालाई स्रोत
नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियारको माग
काठमाडौं, साउन ११ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने नीजि क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा
आईपीएल क्रिकेटका प्ले–अफ् खेलहरु आजबाट हुँदै
१७ वटा स्थानीय तहको मतपरिणाम आउन बाँकी